फुट्‍दै जसपा: महन्थ समूह र हृदयेश समूहबीच एकिकरणको अन्तिम तयारी
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २२:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर समूह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबीच एकीकरण हुने अन्तिम तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै सल्लाहअनुसार यी दुई समूहबीच एकिकरण हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको हो । ओलीको डिजाइनअनुसार उनीहरूबीच एकिकरण हुन लागेको एक नेताले बताए ।
जसपा फुटको डिलमा पुगिरहेकै बेला दुई समूहबीच एकीकरण गरेर नयाँ दल बनाउने सहमति नजिक पुगेका हुन् । ‘सहमतिको अन्तिम अवस्थामा छौँ । केही दिनभित्रै एकिकरण हुनेछ’ नाम नखुलाउने सर्तमा ठाकुर समूहका एक नेताले भने ‘केही समयअघि मात्रै जसपाका नेताहरू र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी समूहबीच नयाँ दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सिंहदरबारमा कुराकानी भएको थियो । अहिलेसम्म छलफल सकरात्मक छ ।’
जसपाभित्र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो जसरी पनि ओलीलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छन् भने उपेन्द्र यादव-डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकारबाट ओलीलाई जसरी पनि हटाउनै पर्ने लाइनमा छन् ।
आज मात्रै जसपाका यादव-भट्टराई समूहले अध्यक्ष ठाकुरसहित नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई साधारणसदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट कारबाही गरेको छ । कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ (१, २ र ३) बमोजिम हाम्रो दलको दर्ता किताबबाट नाम हटाइ अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरिन्छ ’ अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ । निर्वाचन आयोगमा उक्त पत्र दर्ता भइसकेको छ । दर्ता नम्बर १३४१ रहेको छ ।
जसपाभित्र तिब्र विवादकैबीच भट्टराईले केही दिनअघि हात मिलाएर आ-आफ्नो बाटो लाग्‍न सुझाव दिएका थिए । ‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार, पार्टी र नेतृत्वको सामुहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो’ भट्टराईले भनेका थिए ‘नयाँ निर्माण निम्ति पुरानो भत्कनैपर्छ । समयले नयाँ ध्रुवीकरण खोज्दैछ । अत:मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं ! भेडाभेडासँग र बाख्राबाख्रासँग हुन दिऊँ ! हातमिलाएर आ-आफ्नो बाटो लागौं ! हिँडिरहे फेरि भेट हुनेछ !
६ असार २०७८, आईतवार १३:२३